सिमकोटमा बैशाख अन्तिम हप्तादेखि वार्षिक परीक्षा आइतवार, बैशाख ५, २०७८
हुम्लामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध आइतवार, बैशाख ५, २०७८
हुम्लामा बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालन जिल्लामा दर्ता नै नगरि होटेल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाईएको छ । सिमकोट बजारको अनुगमन गर्ने क्रममा दर्ता नगरि ब्यबसाय संचालन गरेको पाईएको हो । बिहिवार, बैशाख २, २०७८
हुम्लामा पत्रकारलाई सरोकारवालाको सुझाव ! हुम्ला जिल्ला भित्रका क्रियाशिल रहेका पत्रकारहरुलाई व्यवसायिक पत्रकारितामा लाग्न सरोकारवाला पक्षले सुझाव दिएका छन् । पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाको आयोजनामा नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई शुभकामना दिदैँं सरोकारवालाहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन । सोमवार, बैशाख ६, २०७८
हवाई मार्गबाट कर्णाली करिडोरको अनुगमन सोमबार हवाई मार्गबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङ हुम्ला पुगे । हवाई मार्गबाट कर्णाली करिडोरको अनुगमनका क्रममा हुम्ला पुगेका मन्त्री नेम्वाङले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट कर्णाली करिडोरको असजिलो छारे खण्डको काम नेपाली सेनालाई दिने बताए । मंगलवार, बैशाख ७, २०७८
कुलो मर्मत नहुँदा हुम्लामा चालीस रोपनी धान रोप्ने खेत बाँझै सिमकोट गाउँपालिका – १ र २ मा पर्ने ग्याग्रु ज्युलाको चालीस रोपनी मार्सी धान फल्ने खेत बाँझै रहेको छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा पक्की कुलो भत्किएपछि खेत बाँझो रहेको हो । मंगलवार, बैशाख ७, २०७८
आर्थिक अभावले सात बर्षदेखि ओछ्यानमै ! जन्मेको तीन महिनापछि छारे रोगबाट पीडित बनेका सिमकोट गाउँपालिका–७ को चौगानफयाका सात बर्षिय बालक लोकेश शाहीको उपचारमा आर्थिक अभाव भएको । बुधवार, बैशाख ८, २०७८
खार्पुनाथको तुइन सेन्टरमा मोटरवेल पुल बन्दै कर्णाली नदीमा दुई वटा मोटरेवल पुल बन्ने भएका छन । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका तीन वटा वडासंग सडक सञ्जाल जोड्नका लागि पक्की पुल बन्न लागेको हो । बुधवार, बैशाख ८, २०७८
हुम्लामा प्रहरी जवानद्धारा भवन निर्माण हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका – १ ज्याग्रुमा प्रहरी जवानद्धारा प्रहरी चौकीको तीन कोठे भवन निर्माण भएको छ । उक्त भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही स्थानीयको श्रमदान र प्रहरी जवानद्धारा भवन निर्माण भएको हुम्लाका प्रहरी नायब उपरिक्षक हेरम्व शर्माले बताए । शनिवार, बैशाख ११, २०७८
कोरोना जोेखिम बढेकै बेला हुम्लामा परीक्षा गराउँदै कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । यसवीच हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका भित्रका विद्यालयहरुमा आगामी बैशाख २० गतेबाट बार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका विद्यालयहरु बन्दहुन लागेका बेला सिमकोटमा बार्षिक परिक्षागर्ने मिति तोकेको हो । आइतवार, बैशाख १२, २०७८
मौसमी फ्लुको कारण हुम्लामा विरामीको चाप बढ्यो मौसमी फ्लुको कारण हुम्लाका अस्पतालहरुमा विरामीको चाप बढ्दै गएको छ । यता कोरोनाको त्रास बढिरहेको छ । योसँगै हुम्लामा मौसमी फ्लुको बिरामीहरु दिनौ बढ्न थालेका छन । पछिल्लो पाँच दिनयता हुम्लामा हिमपात र बर्षाले चिसो बढेपछि एक्कासी मौसमी फ्लुका विरामी बढेका हुन । सोमवार, बैशाख १३, २०७८
हुम्लामा ट्राफिक प्रहरीद्धारा सवारी साधन चेकजाँच अहिलेसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएको जिल्ला कर्णालीको हुम्ला । त्यहाँकेही आन्तिरिक यातायातका सवारी साधनहरु सञ्चालनमा आएका छन । हाल सदरमुकाम सिमकोटबाट हेक्पा खोला, डाँडाफया, लिमाटाङ, ठेहे, दोजाम र खार्पुमा मात्र आवत जावत गर्ने गरेका छन । उक्त यातायात व्यवसायीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी हुम्लाले सावधानी अपनाउनका आग्रह गर्दै चेकजाँच सुरु गरेको छ । सोमवार, बैशाख १३, २०७८
‘मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ...’ कोरोना कहरको बेलामा प्रहरी जवानदेखि अधिकृतहरुले हुम्लामा मानव अधिकारको सम्मान नगर्नेलार्ई समस्या पर्ने प्रहरी नायब उपरिक्षक ( डिएसपी ) हेरम्भ शर्मा बताए । शर्माले भने, ‘कोरोनाको त्रास बढिरहेको बेलामा नेपाल प्रहरीले पनि रोकथाममा आफ्नो भुमिका खेलिरहेको छ । जनताको दैलोमा पुगिरहेको छ । सबैको अधिकार सबैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बुधवार, बैशाख १५, २०७८
हुम्लामा १५ बेडको कोरोना अस्पताल बनाइने गतवर्ष कोरोनाका बेला काम चलाउन आइसोलेशन वार्ड स्थापना गरिएको भएपनि हाल त्यो हटेको बेला १५ बेड क्षमता भएको कोभिड अस्पताल स्थापना गरिने अस्पतालका डाक्टर टासी आङ्जु लामाले जानकारी दिए । शुक्रवार, बैशाख १७, २०७८
'ग्रीनजोन' हुम्लामा यसरी भित्रियो कोरोना सम्भावित कोरोना संक्रमित भित्रिने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै स्वास्थ्यकर्मीद्धारा एन्टिजीन किटबाट गरिएको परिक्षणमा उनीहरुमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहले जानकारी दिए । मंगलवार, बैशाख २१, २०७८
हुम्लामा निषेधाज्ञाका बेला तीन घण्टा पसल खुल्ने हुम्लामा निषेधाज्ञाको अवधिमा बिहान सातदेखि दश बजेसम्म दैनिक उपभोग्य सामाग्री जन्य पसलहरु सञ्चालन हुने भएका छन् । यो अवधिमा अन्य सबै गतिविधिहरु भने ठप्प रहने भएका हुन । मंगलवार, बैशाख २१, २०७८
हुम्ला भित्रिएका ३३६ जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा एक हप्तायता हवाई मार्गबाट हुम्ला भित्रिएका तीन सय भन्दा बढी यात्रुहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु भएको छ । सोमवार सुर्खेत र नेपालगंजबाट हवाई जहाजमा आएका यात्रुमध्ये आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला भित्रिएका सबै यात्रुको ट्रेसिङ सुरु भएको हो । बुधवार, बैशाख २२, २०७८
सर्केगाँडमा सिमान्तकृतका माग पुरा गर्न ज्ञापनपत्र संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भएपनि गाउँपालिकाले सिमान्तकृत वर्गका मागहरु पुरा नगरेको भन्दै नागरिक समाजले माग पत्र पेश गरेको छ । पहुँच र भनसुनका आधारमा माग पुरा हुने र तर गाउँपालिकासम्म पहुँच नपुग्ने सिमान्तकृत वर्गका माग कहिल्यै सुनुवाई नभएको भन्दै नयाँ योजना तर्जुमा हुने समयमा समाजले सो माग अघि सारेको हो । बुधवार, बैशाख २२, २०७८